उपकुलपतिमा जोशीले लिए नियुक्ती –
जिल्ला अस्पतालको रुपमा रहेको हेटौंडा अस्पातललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा बिकास थालेको वागमतीसरकारले उपकुलपतिको नियुक्ती गरेको छ । बुधबारको मन्त्री परिषद बैठकले नियुक्त गर्ने निर्णय गरेसँगै सुक्रबार नव नियुक्त डाक्टर विश्वराज जोशीले नियुक्ती सँगै पद तथा गोप्यनियताको सपथ लिएका छन् ।
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले नियुक्ती दिएका छन् भने मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले पद तथा गोप्यनियताको सपय गराएका थिए । सपथ लिएपछि डा. जोशीले जिम्मेवारी अनुसार काम गरेर देखाउने बताए । सपथ ग्रहणमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रतिष्ठान स्थापना गरेर प्रदेश सरकारले उल्लेखनीय कार्य गरेको दावी गरे । उनले प्रतिष्ठानको कार्य अव तिव्रगतिमा अघि वढने भन्दै उपकुलपतिको योग्यता र क्षमताका आधारमा प्रदेशमा ल्याएको बताए ।
बागमति प्रदेशमाअरु प्रदेशमा भन्दा सबै हिसावले उत्कृष्ट रहेको र महत्वपुर्ण काम गर्दा मकवानपुरको लागि मात्रै नभई प्रदेशको लागि गरेको मुख्यमन्त्री पौडेलले वताए । प्रतिष्ठान भएपछि हेटौंडा अस्पताल अव ३ सय वेडको मुख्यमन्त्री पौडेल जानकारी दिए । उनले प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका अस्पताललाई प्रतिष्ठान भित्र ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको वताए । प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नवनियुक्त उपकुलपति डा. विश्वराज जोशीले प्रतिष्ठानका वारेमा अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए । डा.जोशीलाई ४ बर्षका लागि प्रदेशले स्थापना गरेको प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नियुक्त गरेको हो । यसअघि वीर अस्पतालमा नेसनल एकेडेमीअफ मेडिकल साईन्सको रजिस्ट्रार, वीर अस्पतालमा युरोलोजिष्ट प्रमुख समेत रहेका जोशीले सन् १९७४ माएमडी र १९८३ माडाक्टर उपाधी हासिल गरेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रियसभाका सदस्य रामचन्द्र राइ, बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंगेल, भूमि व्यावस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दार्जे लामा, प्रदेशका प्रमुख सचिव डाक्टर मानबहादुर विके, प्रदेशसभाका सदस्यहरु, बिभीन्न मन्त्रालयका सचिब तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
« ‘इनफ इज इनफ’ अभियानका अभियन्ताहरुको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप
नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषमा ४५ अर्ब ८६ करोड ५० लाख »